काठमाडौं । कोभिड–१९ बीमालेख खरीद गर्दा अब सर्वसाधारणले सरकारबाट ५० प्रतिशत अनुदान पाउने भएका छन् । साथै, निजामती कर्मचारीहरूको पनि शतप्रतिशत सरकारी अनुदानमा कोरोना बीमा हुने भएको छ । संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० प्रतिशत अनुदानमा सर्वसाधारणका लागि कोरोना बीमा सञ्चालन गर्ने तथा निजामती कर्मचारीलाई सरकारी अनुदानमा यस्तो बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बीमा समितिले कार्यविधि बनाएपछि आम सर्वसाधारणले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन् । समितिका अनुसार संस्थागत तथा पारिवारिक रूपमा बीमा गर्दा पनि यो सुविधा पाइनेछ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले यसै हप्तादेखि नै यो कार्यविधि लागू हुने बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भए पनि अझै आधिकारिक पत्र प्राप्त भएको छैन । आइतवारसम्म आधिकारिक पत्र आउँछ होला,’ उनले भने, ‘त्यो आएपछि हामी यसलाई तत्काल लागू गर्नेछौं । सम्भवतः आइतवार/सोमवारदेखि नै यो लागू हुनेछ ।’
बीमालेखअनुसार आम मानिसले रू. १ लाख र रू. ५० हजारको बीमांकमा यस्तो बीमा गर्न सक्छन् । रू.१ लाख बीमांक बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति रू. १ हजार र रू. ५० हजारको बीमांक बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति रू. ५०० बीमा शुल्क लाग्नेछ । परिवारका सदस्य र संस्थाका कर्मचारीको संयुक्त रूपमा बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ४० प्रतिशत छूट दिइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै, उनीहरूको बाँकी रहेको ६० प्रतिशत बीमाशुल्कमा पनि तोकिएको मात्रामा अनुदान दिइने समितिको भनाइ छ ।